Home Wararka Haweeney xaamilo aheyd oo aano Qabiil loogu dilay degaanka Kaxandhaale, Galgaduud
Haweeney xaamilo aheyd oo aano Qabiil loogu dilay degaanka Kaxandhaale, Galgaduud
Haweeney xaamilo aheyd ayaa aano qabiil awgeed shalay loogu dilay deegaanka Kaxandhaale ee ka tirsan Gobolka Galgaduud, waxaana sidoo kale la dhaawacay mid kale.
Allaha u naxariistee marxuumada ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Hodan Cabdi Jaamac oo aheyd haweeney xoolo dhaqato ah, waxaana goobta uu falku ka dhacay tegay qoyskeeda oo Meydka geeyay Gelinsoor.
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in ay tahay falkaasi mid laga naxo waxay ku baaqeen in gacanta lagu soo dhigo kooxihii dilka geystay. Gobolka Galgaduud maalmihii la soo dhaafay waxaa ka dhacayay dagaal beeleedyo khasaare kala duwan geystay.
Previous articleCali Guudlaawe oo kulan la yeeshay hay’adaha amniga ee Beledweyne
Next articleCabdi Ileey oo maxkamad ka soo muuqday, rajana ka qaba in la sii daaayo
Macawisleey oo dishay Amiirka alshabaab u qaabilsan xarar-dheere
MW Farmajo: Baydhabo waxaa ka dhacday Doorasho Taariikhi ah -Waa Run...